ဟိုယခင် အချိန်တုန်းကတည်းက လူသားဆန်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့တဲ့ ဇေယျာသော်အကြောင်းပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ရန်ချမ်း – Shwe Likes
ဟိုယခင် အချိန်တုန်းကတည်းက လူသားဆန်တဲ့စိတ်ရှိခဲ့တဲ့ ဇေယျာသော်အကြောင်းပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ရန်ချမ်း
2000 ခုနှစ်စွန်းစွ န်းအချိန်ေ တွလော က်ကဖြ စ်ခဲ့တဲ့အဖြစ် အပျက် တစ်ခုက ခုချိန်ပြောလို့ အကောင်းဆုံးပဲ မို့ပြောပါရစေ☝️ နေရာက အဲ့အချိန်ရဲ ့ဘော်ဒါေ တွအစုံဆုံး popular အဖြစ်ဆုံး mr.Guitar မှာ​မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုလုပ် တော့ထုံး စံအတိုင်း လူစုံတက် စုံပဲစားကြေ သာက်ကြ ပျော်ကြပါးကြပေါ့……
နည်းနည်းအ ရှိန်ရလာေ တာ့ game master ကိုမောင်ေ မာင်အေးက (အဲ့အချိန်ကသူတို့ dream boat တောင် စမလုပ်ြ ကသေးဘူး)​ ကစားနည်းေ ပါင်းစုံကစားြ ကမယ်ဆိုပြီး
ဆိုင်အြ ပင်ဘက်နားလောက်မှာေ နရာချပြီး ကစားကြ ပါလေရော ငြင်းရခုန် ရတာေ တွရော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု လုံးအကျယ်ြ ကီးကြားရအော င်ရယ်ကြတာေ တွရောစုံလို့ ဆော့ေ နရင်းထပ်ရောက်လာ တဲ့သူတွေ ဘေးနား ရပ်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုေ ရာအတင်းဆွဲေ ခါ်ဆော့နဲ ့ပျော်နြေ ကရင်း
ကျွန်တော်တို ့ကစားပွဲနဲ့ခပ်လှ မ်းလှမ်းဆို င်အဝင်အဝမှာမျ က်နှာကြီးသု န်မှုန်ပြီးကျွန်တော် တို့ပျော်ပါးေ ဆာ့ကစားနေတာ ကိုရပ်ကြည့်နေတဲ့ ဘဲတစ်ပွေ ကိုသတိထား မိလာကြတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ကိုမောင်အြေး ကီးကစပြီး သွားခေါ်လိုက် တယ် ဟေ့***လာေ လကွာငါတို့နဲ့လာ ပူးပေါင်းလေ ဘာညာေ ပါ့…….
အဲ့လိုလည်း သွားခေါ်လိုက်ရောအဲ ့ဘဲကခုဏ ကသုန်မှုန်နေ တဲ့မျက်နှာ ကနေချက်ချ င်းကြီးအာဠာဝကဝ င်သလိုရှူးရှဲ နဲ့ဒေါသတြွေ ဖစ်ပြီး ထပြောလိုက် တဲ့စကားက……
“မင်းတို့တွေကဒီမှာပျော်နေကြတယ် ဟိုမှာ(အဲ ့ချိန်ကတနင်္သာရီတို င်းဘက်မှာြ ဖစ်ဖို့များတယ်ဆူ နာမီဝင် တာမဟုတ်ရင် မုန်တိုင်းတစ်ခု ခုပဲ)​ လူတွေသေ ကုန်ပြီစားစ ရာနေစရာမရှိြ ကတော ့ဘူး”​ ဆိုပြီးပြော ချလိုက်ရော 🤯🤨😌😵😏😶😔🥴🤭🤔🤐😬🥶
အားလုံး ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေ ရာကနေငြိမ်ကြ သွားကြေ ရာ ဘာဖြစ်လို ့လည်းပေါ့ ဟိုမှာြ ဖစ်တာငါတို့နဲ့ဘာ ဆိုင်လည်းပေါ့ ဘာပေါ့ ညာပေါ့ ပေါ့တွေအများြ ကီးဖြစ်ကု န်ကြရော ချက်ချင်း ကိုမောင်ေ အးက အေးပါကွာ ဟုတ်ပါတယ် ငါတို့မသိလို့ ပါတစ်ေ အာင့်နေနားြ ကမယ်အေးေ ဆးအေးဆေးဆိုြ ပီးချော့ လွှတ်လိုက်ရ တယ်။
တစ်ကယ် လည်းအဲ့ချိန်က ကျွန်တော် တို့ဘာသိဘာ သာနေခဲ့ကြ တယ် တနင်္သာ ရီတိုင်းတစ်ခု ထဲမှမဟုတ်ဘူး မြန်မာတ စ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တို င်းရင်းသားေ တွရဲ့ဒုက္ခေ တွစစ်ပွဲတွေ ဘာတစ်ခုမှပူပေးရ မှန်းကူေ ပးရမှန်းမ သိခဲ့ကြဘူး…..
ခုချိန်ရဲ့အ ဆိုးထဲကအကော င်းကတစ်သက်လုံး မရှိခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားေ တွအချင်းချင်းနား လည်မှုတွေဖေး မမှုတွေ တစ်နေရာ ရဲ့ဒုက ္ခကိုမျှဝေခံစားေ ပးတတ်လာြ ကတာတွေပဲ…..
အဲ့အလေ့အ ထကောင်းလေးတွေ ကိုဆက်ထိ န်းကြရေ အာင်ဗျာ အသက်ေ ပးလိုက်ရတဲ ့မိသားစုတွေ စစ်ရှော င်နေရတဲ့မိသား စုတွေ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မိသားစုတွေ ဖမ်းဝရမ်းနဲ့ပြေးေ နရတဲ့မိသားစုတွေရှိေ သးတယ်ဆို တာကိုမမေ့ဖို့လည်းမှာ ချင်ပါတယ် မပြီးသေး ဘူးလေနော်……. PS : သုန်မှုန်နေတဲ့ဘဲ = ဇေယျာသော်
2000 ခုႏွစ္စြန္းစြ န္းအခ်ိန္ေ တြေလာ က္ကၿဖ စ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္ အပ်က္ တစ္ခုက ခုခ်ိန္ေျပာလို႔ အေကာင္းဆုံးပဲ မို႔ေျပာပါရေစ☝️ ေနရာက အဲ့အခ်ိန္ရဲ ့ေဘာ္ဒါေ တြအစုံဆုံး popular အျဖစ္ဆုံး mr.Guitar မွာ​ေမြးေန႔ပြဲတစ္ခုလုပ္ ေတာ့ထုံး စံအတိုင္း လူစုံတက္ စုံပဲစားေၾက သာက္ၾက ေပ်ာ္ၾကပါးၾကေပါ့……
နည္းနည္းအ ရွိန္ရလာေ တာ့ game master ကိုေမာင္ေ မာင္ေအးက (အဲ့အခ်ိန္ကသူတို႔ dream boat ေတာင္ စမလုပ္ျ ကေသးဘူး)​ ကစားနည္းေ ပါင္းစုံကစားျ ကမယ္ဆိုၿပီး
ဆိုင္ၾအ ပင္ဘက္နားေလာက္မွာေ နရာခ်ၿပီး ကစားၾက ပါေလေရာ ျငင္းရခုန္ ရတာေ တြေရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု လုံးအက်ယ္ျ ကီးၾကားရေအာ င္ရယ္ၾကတာေ တြေရာစုံလို႔ ေဆာ့ေ နရင္းထပ္ေရာက္လာ တဲ့သူေတြ ေဘးနား ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့သူေတြကိုေ ရာအတင္းဆြဲေ ခၚေဆာ့နဲ ့ေပ်ာ္ေၿန ကရင္း
ကၽြန္ေတာ္တို ့ကစားပြဲနဲ႔ခပ္လွ မ္းလွမ္းဆို င္အဝင္အဝမွာမ် က္ႏွာႀကီးသု န္မႈန္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ တို႔ေပ်ာ္ပါးေ ဆာ့ကစားေနတာ ကိုရပ္ၾကည့္ေနတဲ့ ဘဲတစ္ေပြ ကိုသတိထား မိလာၾကတယ္ ။ အဲ့ဒါနဲ႔ကိုေမာင္ေၾအး ကီးကစၿပီး သြားေခၚလိုက္ တယ္ ေဟ့***လာေ လကြာငါတို႔နဲ႔လာ ပူးေပါင္းေလ ဘာညာေ ပါ့…….
အဲ့လိုလည္း သြားေခၚလိုက္ေရာအဲ ့ဘဲကခုဏ ကသုန္မႈန္ေန တဲ့မ်က္ႏွာ ကေနခ်က္ခ် င္းႀကီးအာဠာဝကဝ င္သလိုရႉးရွဲ နဲ႔ေဒါသေႂတြ ဖစ္ၿပီး ထေျပာလိုက္ တဲ့စကားက……
“မင္းတို႔ေတြကဒီမွာေပ်ာ္ေနၾကတယ္ ဟိုမွာ(အဲ ့ခ်ိန္ကတနသၤာရီတို င္းဘက္မွာျ ဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္ဆူ နာမီဝင္ တာမဟုတ္ရင္ မုန္တိုင္းတစ္ခု ခုပဲ)​ လူေတြေသ ကုန္ၿပီစားစ ရာေနစရာမရွိျ ကေတာ ့ဘူး”​ ဆိုၿပီးေျပာ ခ်လိုက္ေရာ 🤯🤨😌😵😏😶😔🥴🤭🤔🤐😬🥶
အားလုံး ဝုန္းဒိုင္းၾကဲေန ရာကေနၿငိမ္ၾက သြားေၾက ရာ ဘာျဖစ္လို ့လည္းေပါ့ ဟိုမွာျ ဖစ္တာငါတို႔နဲ႔ဘာ ဆိုင္လည္းေပါ့ ဘာေပါ့ ညာေပါ့ ေပါ့ေတြအမ်ားျ ကီးျဖစ္ကု န္ၾကေရာ ခ်က္ခ်င္း ကိုေမာင္ေ အးက ေအးပါကြာ ဟုတ္ပါတယ္ ငါတို႔မသိလို႔ ပါတစ္ေ အာင့္ေနနားျ ကမယ္ေအးေ ဆးေအးေဆးဆိုျ ပီးေခ်ာ့ လႊတ္လိုက္ရ တယ္။
တစ္ကယ္ လည္းအဲ့ခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘာသိဘာ သာေနခဲ့ၾက တယ္ တနသၤာ ရီတိုင္းတစ္ခု ထဲမွမဟုတ္ဘူး ျမန္မာတ စ္နိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ တို င္းရင္းသားေ တြရဲ့ဒုေကၡ တြစစ္ပြဲေတြ ဘာတစ္ခုမွပူေပးရ မွန္းကူေ ပးရမွန္းမ သိခဲ့ၾကဘူး…..
ခုခ်ိန္ရဲ့အ ဆိုးထဲကအေကာ င္းကတစ္သက္လုံး မရွိခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေ တြအခ်င္းခ်င္းနား လည္မႈေတြေဖး မမႈေတြ တစ္ေနရာ ရဲ့ဒုက ၡကိုမၽွေဝခံစားေ ပးတတ္လာျ ကတာေတြပဲ…..
အဲ့အေလ့အ ထေကာင္းေလးေတြ ကိုဆက္ထိ န္းၾကေရ အာင္ဗ်ာ အသက္ေ ပးလိုက္ရတဲ ့မိသားစုေတြ စစ္ေရွာ င္ေနရတဲ့မိသား စုေတြ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့မိသားစုေတြ ဖမ္းဝရမ္းနဲ႔ေျပးေ နရတဲ့မိသားစုေတြရွိေ သးတယ္ဆို တာကိုမေမ့ဖို႔လည္းမွာ ခ်င္ပါတယ္ မၿပီးေသး ဘူးေလေနာ္……. PS : သုန္မႈန္ေနတဲ့ဘဲ = ေဇယ်ာေသာ္
ချစ်သူ ကိုယ်တို င်ရိုက်ကူးေ ပးထားတဲ့ အမိုက်စားခန ္ဓာကိုယ်အလှတွေ အထင်း သားပေါ်စေမယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကိုတင်ပေး လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ မော်ဒယ် ရွှေအိမ်စည်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် အကြောင်း ပရိသတ်ကြီးကို ဖိတ်စာနဲ့ စပရိုက်တိုက်လိုက်တဲ့ မအေးသောင်း